ikhaya » Okufumaneka » Indlela eya kwi-4K-Ready Indawo yokuLondoloza indawo: Ukudibanisa ukungaqiniseki ngoBungqina kunye nokuFinzeka
Indlela eya kwi-4K-Ready Indawo yokuLondoloza indawo: Ukudibanisa ukungaqiniseki ngoBungqina kunye nokuFinzeka
NguDave Frederick, I-Quantum
Imisebenzi yokusebenza ye-4K ibonisa iimfuno eziphezulu kakhulu, ngokuhlukahluka okukhulu kunokuba kube ne-2K kunye HD Umsebenzi osebenza ngoku oqhelekileyo kwi-industry kunye noshishino lokuzonwabisa. Izixhobo zokuhamba emva kwe-4K akufanele zihlangabezane nokunyuka okumangalisayo kwidata, kodwa kunye nokunyuka okuhambelanayo kumanqwanqwa kunye nokusetyenziswa kwamandla okufuneka ukuba isebenze ngokufanelekileyo nangomxholo wokulungisa isigqibo. Nangona ubukhulu becala kunye nobungakanani beefayili lunokuba ngumngeni kwisiseko sezinto zokugcina, iintlobo zezifomathi - iintlobo ezahlukeneyo HD, I-2K, i-4K kwaye kungekudala i-8K - yenza imihluko emikhulu kwiifayile zeefayile, ngokunjalo.
Kwenzeka phi ukuba idatha, amandla kunye nokusebenza kuyaphumelela kakhulu, kuxhomekeke kwimibandela ephuma kwi-spiking imfuno yokuba "naphi na, nayiphi na ixesha" inomxholo wokunciphisa ixesha elide lokunikezela, kunye neendawo eziqhelekileyo zeprojekthi yeposi. Ngokujonga ngokubhekiselele kwiinkalo ezibalulekileyo zokugcinwa kwemisebenzi yokusebenza, nangona kunjalo, izakhiwo zokuhamba emva kokuvelisa zinganciphisa inani labangamazi kwaye zicwangcise ngempumelelo kwixesha labo elizayo le4K. Ukongeza kokuqwalasela ukusebenza nokugcinwa kwezinto, kufuneka bavavanye umgangatho wokufikeleleka kokuqukethwe okuyimfuneko, kunye nendlela efanelekileyo yokugcinwa kwimiqulu.
Inkqubo yokugcina inkqubo ixhomekeka kakhulu kwizinto ezintathu: ukulawula i-drive, ukuphathwa kwenethiwekhi kunye neendlela zokusebenza zefayile. Ukuba ezi ziqondwa kakuhle, kuba lula ukufumanisa isisombululo esiza kulungiswa kakuhle kwifomati yesithuba (post rate), amandla kunye nokubala kwemitha (inani labasebenzisi bangexeshana).
Ngaphakathi kwe-infrastructure ye-4K yokugcinwa kwamalungiselelo, ukusebenza ngokubanzi kwezixhobo ezisetyenziswayo kufuneka kulawulwe ukubonelela ngokukhawuleza kwe-gigabyte-nge-yesibini ukukhawuleza okufunekayo ekusebenziseni izixazululo eziphezulu. Kuthetha ukuthini oku kukhetho lokuqhuba? Ewe, cinga ukuba umda womda wonikezelo owenziwa ngumntu ngamnye ojikelezayo i-disk drive (HDDs) ukusuka kwi-75 MB / s ukuya kwi-150 MB / s, kwaye kwakhona ukuba ii-SSDs ezitshixo zikwazi ukuhambisa kwi-1900 MB / s nganye. Cinga kwakhona into yokuba enye yimizuzu yokungaxinzekanga i-4K idinga malunga ne-50 GB, kwaye ii-SSD zoshishino ezibizayo ziyakwazi ukufikelela kwi-2 TB, okanye malunga nemizuzu ye-40 nganye.
Ekugqibeleni, ngelixa ijubane le-SSD linyanzelisa, iindleko zongeza ngokukhawuleza ebusweni beemfuneko ze-4K. Nangona amaxabiso e-SSD awa, ii-HDD ziyaqhubeka zibiza kakhulu kwiimigigabyte ngokwemiqathango. Ii-HDD kunye ne-RAID 6 ukukhusela inikezela ngeenzuzo ezingcono kakhulu zentengo-ntsebenzo, ngokukodwa xa iinkqubo ezininzi zediskiti zifundwa ngokulandelelana kwaye zibhalwa ngamacwecwe kunye neefayile. Kweminye imiba, njengemifanekiso ye-animation kunye ne-VFX, ii-SSD okanye umxube we-SSD / HDD kunye nenkohlakalo yolwazi oluqilileyo kwiimali zokugcina izinto, unokubonelela ngokubambisana ngakumbi kunye nentlawulo.
Indlela ekudibaniselwano ngayo inethwekhi kwisiseko sokugcina ifuthe ngqo kwi-intsebenzo. Esikhundleni sokubandakanyeka kwingxoxo malunga nokuphakama kokugcinwa kwenethiwekhi eqhotyoshelweyo (NAS) kunye nenethiwekhi yendawo yokugcina (SAN), iikhosi elingcono namhlanje kukuqinisekisa ukuhlanganiswa kwezi zibini ezikwazi ukubonelela ngokugqithiseleyo umsebenzi kunye nokuxhumeka komxhasi kubalulekile ekuxhaseni umsebenzi we-4K .
Ukubonelela ngokukhawuleza komda womda phakathi kwamashishini kunye nokugcinwa okwabiwo, ukudibanisa kwe-SAN ye-Fiber idibanisa ezo zinto zentlalo-post efuna ukufikelela ngokukhawuleza, okunokuthenjwa. Ukunxibelelana kwe-NAS e-Ethernet engathengiyo kunokudinga ukusetyenziswa kwexesha elingaphezulu kodwa kulungelelaniswe neminye imisebenzi emininzi ayinakuchaphazelekayo. Lo mzekelo unikezela ngenzuzo enkulu kunxibelelwano lwe-SAN kunye ne-NAS olwandisiweyo kwiinkqubo zokusebenza ze-Linux, Windows kunye ne-Mac.
Inkqubo yefayili eyinkqinkqileyo inokunceda ezininzi zeeWindows, iLinux kunye neeWeb kwiziko lokusebenzela ukufikelela kwisitoreji esabelwe kwi-network yeFiber Channel, okubenza bafunde nokubhalela umlinganiselo ofanayo wokugcina ngexesha elinye ngaphandle kokulibaziseka kwenethiwekhi. Ngenxa yoko, abenzi bokuqukethwe abakwiindawo ze-4K banokuzonwabisa ngokufikelela ngokukhawuleza, okwabelwana ngazo kwiifayile zeendaba eziphambili ekusebenzisaneni ngokufanelekileyo. Xa ukugcinwa kufikelela kumaqela amaninzi, ngamanye amaxesha kubandakanya ukugcinwa kwefu, inkqubo yefayile ayikwazi ukululaza kuphela ukunikezelwa kweefayile kwizicelo nakubasebenzisi kodwa iphinda iphakanyise imigaqo-nkqubo ukuqinisekisa ukuba umxholo ungendawo efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo.
Kukho nawuphi na umsebenzi onokukhula, umkhiqizo oqhubekayo ufuna ukuba ungeze amandla okugcina ngaphandle kwemfuneko yokufuduka kwefayile okanye ukugqiba ixesha eliphantsi. Ikhono lokuqulunqa ukusebenza kwiimfuno eziguqukayo, nokuba ngenxa yendlela yokwenza ifomathi okanye umthamo womsebenzi, ngokunjalo kuyisisiseko kwimveliso ephezulu. Xa umsebenzi kunye nomthamo unokuzimelela ngokuzimela, esinye isibonelelo sithuba singakwazi ukufezekisa iimpawu zokusebenza ezifanelekileyo ekuhambeni komsebenzi, okanye ukuhambelana nemisebenzi kunye neemfuno zabantu abahlukeneyo ngaphakathi kokuhamba komsebenzi.
Ukugcina iiprojekthi ezigqibeleleyo zokulungiswa kwemveliso ezibiza ngokukhawuleza kwindleko - kodwa kubalulekile ekudaleni ngokukhawuleza kwe-multiplatform ezikhutshwayo. Ukunikezelwa kwexesha elide lokuzivuselela kwakhona, ii-NAS ze-RAID-based systems ziba ngenye indlela eyingozi kakhulu njengoko kusebenza iiyure kunye nokunyuka kwamandla. Ukugcinwa komsebenzi, ngakolunye uhlangothi, unikezela amandla okuphulukisa okuqinisekisa ukuthembeka kunye nokufumaneka kweefayili kunye nemethadatha edibeneyo egcinwe njengezinto kwiinqwelo ezininzi. Ngomxholo we-4K ukuqhuba iimfuno zamandla, ixesha lokuphucula eliqinisekisiwe yinto yokugcina into eyenza ukuba ibe yinyanzelo elongezelelweyo kwiziseko zokugcina.
Enyanisweni, into yokugcinwa yinto ekhethiweyo yokugcinwa kwamagumbi abucala kunye noluntu, okusebenza njengezoqoqosho, izithuba zokugcina izithuba ezingekho kumhlaba. Ezinye iinkalo zomsebenzi ophezulu wokulungiswa, ezifana nokuhlela okupheleleyo kunye ne-VFX, azinako ukulungeleka ngokwemvelo ifu, kodwa iinkonzo ezisekelwe emafu zingenza lula okanye zinciphise iindleko zemisebenzi efana nokuhlolwa kunye nokuvunywa, ukuhanjiswa, ukunikezela Nokuhanjiswa.
Ukugcinwa kokuqukethwe kunye nokuLondoloza
Ukugcinwa kwexesha lexesha elide kweefayile zeprojekthi ze-4K kunye neenkosi zibiza ukuba i-medium-effective and durable medium medium, kunye ne-LTO tape ifanelana nomthetho osayilwayo. Iikhawudidi zeTape zihlala ixesha elide kuneendlela zokuqhuba kwaye zisebenzise i-fraction ye-power disks ifunayo. I-LTO-7 namhlanje inika i-6TB yokugcinwa kwedatha engaxinzekanga engabhalwa kwi-300 MB / sec ngaphantsi kweepenki kwi-gigabyte, kwaye i-LTO-8 ithembisa ukuzuzisa okukhawulezayo kwindleko kunye nokonga okukhulu.
Ukuphuculwa kokusebenza okuqhubekayo okwenza umgqatswa umgcini wesitoreji esiseduze kunika kwakhona izithuba zokuthunyelwa ngokukhawuleza kokufikelela kwimixholo yazo. Olu luphuculo oluxabisekileyo, ngokukodwa ngokunyuka kweemfuno zabathengi kwimixholo eyenza ukugcinwa kweengxelo ezifumanekayo ngokubaluleka kokugcinwa kwengxelo.
Nangona iinkonzo zolondolozo lwamaziko aseburhulumenteni zinikezela ngokulula kwaye zifikeleleke ukugcinwa kwexesha elide, amaxesha okufikelela okulibazisekile kunye nezantya zokulanda ngokukhawuleza zibenza zilungele ukugcinwa kwesayithi ngaphandle kwesicwangciso esiphezulu sokulondoloza.
Ukusungula isiseko sokugcinwa kwamalungiselelo e-4K ngokuqhelekileyo kubandakanya ukucatshulwa ngokubhekiselele kwintsebenzo kunye namandla okufuneka ukuba kuxhaswe iifom zokusebenza ezisemgangathweni zanamhlanje nangomso, kunye nempembelelo yendawo yokuthengisa yemveliso yamashishini ekhulayo. Ngokuhlanganisana okufanelekileyo kwe-drive, intanethi kunye nokuphathwa kwefayile kwinkqubo eyenza ukuthembeka okuphezulu, ukusabalalulwa okuqhubekayo, amazinga afanelekileyo okufumaneka kunye nokugcinwa kokuqukethwe kwezoqoqosho, izakhiwo zesevisi ziya kulungelelwa ukulungiselela iimfuno eziqinileyo kunye nezihlandlo ezingapheliyo zomsebenzi kwi-high- Ngombululo.
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zokuBasa Umagazini we-Beat Broadcast KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 Nab ubonisa imisebenzi NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 Nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba Sprockit Inkundla ye-Ultra HD	2017-05-06
Previous: I-TVU Networks Iwubonelele ngezona ziBini eziPhambili kwiMiboniso ye-NAB 2017
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "Indlela eya kwi-4K-Ready Indawo yokugcina indawo: Ukudibanisa ukungaqiniseki ngobudlelwane nobunzima". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/the-path-toward--4k-ready-storage-environment-meeting-unpredictability-with-agility-and-flexibility/. Enkosi.